[Creek Creek House] Line 4 Chuhehan Street Subway Phuma amamitha-skwele angu-25 Ikamelo lokulala elikhulu elinovulande omkhulu + Izibani ezidume nge-intanethi zokushona kwelanga - I-Airbnb
[Creek Creek House] Line 4 Chuhehan Street Subway Phuma amamitha-skwele angu-25 Ikamelo lokulala elikhulu elinovulande omkhulu + Izibani ezidume nge-intanethi zokushona kwelanga
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-小芳
[Indawo] Indlu isendlini yase-Anshun, esendaweni enhle kakhulu. Yimizuzu engu-5 ukusuka esitimeleni. Kuthatha imizuzu engu-8 kuphela ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Chuhehan Street. Kuthatha imizuzu engu-10 kuphela ukuya Emtatsheni Wezincwadi Wesifundazwe sase-Hubei. Ungahamba ngezinyawo ukuya e-Shahu Park, e-East Lake Greenway, e-East Lake Scenic Area, njll.
Isevisi 【 efakiwe 】 Sizokunikeza izinto zokugeza ezilahlwayo, izibani ezidume nge-inthanethi zokushona kwelanga, i-HD Smart TV, i-Wi-Fi yokuxhumana ngocingo, isevisi yokugcina imithwalo kanye nesevisi yomsizi kusukela ekungeneni kuya ekuphumeni.
【 Izici 】 Zendlu Ikamelo linombhede omkhulu ongu-1, ongathatha abantu abangu-2 kuya kwabangu-3. Kukhona uvulandi omkhulu negumbi lokuphumula lapho ungapheka khona. Ifanele umndeni nabangane.
[Hlanza futhi uhlanzeke] Ukuhlanza kwansuku zonke nokushintsha ilineni yombhede ukuze uhlale ngokunethezeka
[Idiphozithi Yesibambiso] Izikhiye ezintathu zizonikezwa isivakashi ngasinye lapho singena. Kuzodingeka imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo engu-RMB 100. Imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo izobuyiselwa kuwe lapho uphuma.
Umphakathi wasekhaya wase-Anshun uthule, unokuvikeleka okuhle, indlu isemsebenzini amahora angu-24, ukuhamba okungaphansi kwemizuzu engu-10 ukusuka e-Chuhehan Street, eduze kakhulu ne-Donghu Scenic Area, ungahamba ngezinyawo lapho, awukwazi ukuthenga nokuthenga kuphela, kodwa futhi ujabulele ubuhle bemvelo, iphinde ibe seduze kakhulu nokuphuma kwesitimela, into yokuhamba kulula, iyindawo enhle kakhulu yokuhlala